Kali Linux 2020.3 bịarutere na mgbanwe site na bash ruo ZSH, ndozi maka HiDPI na ndị ọzọ | Site na Linux
Mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke nkesa Linux na-ewu ewu maka Pentest "Kali Linux 2020.3", Nke a gosipụtara mmezi dị iche iche maka ọdịdị nke nkesa, yana ụfọdụ mgbanwe dị mkpa na nchịkọta enyere.
Maka ndị na-amaghị Kali Linux, ị kwesịrị ịmara na emebere sistemu a iji nwalee sistemụ maka adịghị ike, nyocha, nyochaa data fọdụrụnụ ma mata nsonaazụ nke mwakpo ọjọọ.
1 Kali Linux 2020.3 Key New Atụmatụ
2 Budata ma nweta Kali Linux 2020.3
Kali Linux 2020.3 Key New Atụmatụ
N'ime ndị nke isi akpọsa na ụdị ọhụrụ a bụ mbugharị si Bash ruo ZSH. Maka oge ahụ na ụdị nke ugbu a, - ZSH gụnyere dị ka nhọrọ, mana site na nsụgharị ọzọ, mgbe ọnụ mepere emepe, ZSH ga-amalite na ndabara.
Maka ndị gị nwere mmasi inwe ike ịgbanwe na ZHS na-enweghị echere mbupute ọdịnihu, ịnwere ike ịgba ọsọ "chsh -s / bin / zsh").
Mgbanwe ọzọ etinyere bụ na osooso nke nwụnye.n, ebe ọ bụ na ụdị ọhụrụ a A na-atụ aro ka ịkwụsị ịgbapụ nwelite-nwelite n'oge echichiEbe ọ bụ na onye nrụnye nwere ngwugwu niile dị mkpa maka ntinye na-enweghị ntanetị, mana ọ bụrụ na arụnyere nrụnye ahụ na-enweghị ike iwepu netwọkụ ahụ, onye nrụnye ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka.
Ọ bụ ya mere ugbu a a na-atụ aro na onye ọrụ bụ onye na-eme mmelite ahụ ugbu a ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ oge adaba.
Ọzọkwa mgbe ị na-etinye sistemụ na-enweghị njikọ netwọk, a na-enyezi ndepụta predefined nke nkwụnye ego ntanetị karịa faịlụ na-enweghị isi.list.
N'aka nke ozo, ihe ozo banyere edemede ohuru a bu agbatị nkwado maka ngwaọrụ ARM, gụnyere mgbanwe iji melite arụmọrụ na Pinebook, Pinebook Pro, Raspberry Pi, na ODROID-C.
Ọzọkwa a na-ahọrọ desktọọpụ GNOME n'iji ya akpụkpọ ọhụrụ na njikwa faili Nautilus, Tụkwasị na nke ahụ, a melitela nhazi nke ogwe akwụkwụ na isi (dịka ọmụmaatụ, na ntọala, akụkụ ahụ dị ka n'ihu nke ogwe elu).
Y a na-atụpụta ụdị Win-Kex (Windows + Kali Desktọpụ Ahụmahụ), ezubere iji na-agba ọsọ na Windows na WSL2 gburugburu ebe obibi (Windows Subsystem maka Linux).
Ọzọkwa agbakwunye iwu kali-hidpi-mode iji gbanye nhazi nke usoro ọrụ nwere ngosipụta pixel dị elu (HiDPI).
N'ikpeazụ, n'ime mgbasa ozi NetHunter 2020.3 weputara ekwuputala, ebe maka ekwentị mkpanaka dabere na ikpo okwu gam akporo na nhọrọ nke ngwaọrụ iji nwalee usoro maka adịghị ike.
Iji NetHunter, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta mmejuputa nke mwakpo a kapịrị ọnụ na ngwaọrụ mkpanaka, dịka ọmụmaatụ, site na i theomi nke ngwaọrụ USB (BadUSB na HID Keyboard - ịulationomi ihe nkwụnye ntanetị USB nwere ike iji maka ọgụ MITM, ma ọ bụ keyboard USB nke na-agbanwe agwa agwa) na imepụta ebe nweta adịgboroja (MANA Evil Access Point).
Mgbanwe na NetHunter 2020.3 gosiputa mgbakwunye nke uzo ohuru nke Bluetooth Arsenal, nke gunyere nchọpụta Bluetooth, nyocha, ịchapụta ihe na ngwongwo ngwugwu na agbakwunyere nkwado maka Nokia 3.1 na Nokia 6.1 ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Budata ma nweta Kali Linux 2020.3
Maka ndị nwere mmasị ịnwale ma ọ bụ wụnye ụdị distro ọhụrụ ahụ na kọmputa ha, ha kwesiri ima na ha nwere ike ibudata onyogho zuru ezu nke ISO (3.7 GB) ma ọ bụ belata oyiyi (2.9 GB) nke ugbua dị maka nbudata na weebụsaịtị nke nkesa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Kali Linux 2020.3 bịarutere na mgbanwe site na bash ruo ZSH, ndozi maka HiDPI na ndị ọzọ